Codkaaga iyo Bulshadaada | SASCA Manchester
HomeCodkaaga iyo Bulshadaada
Codkaaga iyo Bulshadaada
June 4, 2015 dave porter Somali language version stories
Warsidaha iyo Websiteka ee bulshada Soomaalida Manchester
Nuqulka koowaad ee warsidaha SASCA waxaa soo saaray ururka SASCA oo kaashanaya ardayda culuunta saxaafada ka barada jaamacada MMU.
Ku soo dhawoow nuqulka koowaad ee Warsidaha SASCA !
Nuqulka koowaad ee warsidaha SASCA oo uu soo saaray ururka SASCA oo kaashanaya ardayda culuunta saxaafada ka barada jaamacada MMU ayaa looga gol leeyahay in lagu wargeliyo bulshada hadba waxyaabaha ka socoda guud ahaanba dalka UK.
Warsidaha oo ka soo bixi doona xarrunta SASCA ee ku taala xaafada Moss Side, isla markaana xogtiisa macluumaadka.lagu ururindoono halkaas, ayaa waxa uu sidoo kale leeyahay Website u gaara oo laga heli karo wararka iyo macluumaadka lagu daabaco wargeeyskan. Isla markaana waxa kale oo lagala soconkaraa bogga Twitter iyo Facebuuga.
Warsidahan oo lagu daabici doona luqadaha Soomaaliga iyo Englishka si loo daboolo baahida wareed ee bulshada Soomaaliyeed iyo kuwa aan ku hadal luqada soomaaliga,ayaa diirada saari doona arrimaha bulshada sida cayaaraha, waxbarashada, dhaqanka, arrimaha haweenka, dhalinyarada iyo waxkasta oo horumarkeeda umadeenu ku jiro.
Warsidahan oo howsha soo saaridiisu muddo socotay ayaa hirgalay kadib markii hoowlwadeenadiisu tababar ka heleen qeeybta saxaafada ee jaamacada Manchester Metropolitan University oo uu hormuud ka yahay Dave Porter, isaga iyo ardadiisuba waxeey SASCA ka caawiyeen sidii wargeeyskan iyo Websitekaba aay u hirgeli lahaayeen.
Urrurka SASCA wuxuu isku hoowlayaa sidii bulshada Soomaaliyeed u muuqan laheeyd codkeedana loo maqli lahaa, waxaana warsidahan lagu qori doona luqadaha Soomaaliga iyo Englishka si cid walba uga bogato.
Ugu danbeeyntii waxaa la rajeeyneeynaa inaad ku qanci doontaan aqrinta macluumaadka uu xanbaarsanyahay warsidahan.
← Everyone gets a warm welcome at SASCA
Bulsho ku midaysan dheeshiyo ciyaaraha →